ShweMinThar: Talent Acquisition & Talent Management
ဒီနေ့ခေတ်မှာ Talent နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ အသုံးအနှုန်းတွေ တော်တေ်ာများများ လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းတွေမှာ သုံးလာတာ တွေ့သလို ၊ တကယ်လည်း Talent War (or) War for Talent ဖြစ်နေတဲ့ခေတ်မှာ အရည်အသွေးပိုင်းနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး လုပ်ငန်းခွင်မှာ ၀န်ထမ်းတွေအတွက် မေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်စရာ ဖြစ်လာပါတယ် ။
ဒီတော့ Talent Management ဟာ အရေးပါဆုံးသော လူသားအရင်းအမြစ်ကို ဘယ်လို ဖွံ့ဖြိုးအောင် လုပ်မလဲ ဆိုတာကို ၀န်ထမ်းရေးရာ ကျွမ်းကျင်သူတွေအတွက် ခေါင်းခဲစရာ ဖြစ်သလို ၊ လွယ်ကူလှတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်လည်းမဟုတ်ပါဘူး ။
Talent ကို အဘိဓာန်မှာ ဖွင့်ဆိုထားတာက ပင်ကိုစွမ်းရည် ၊ပါရမီထူးသော လို့ဆိုထားပါတယ် ၊ ဒီတော့ Talent Person ဆိုတာက ပါရမီထူးသော ပင်ကိုအရည်အသွေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူလို့ဆိုရပါမယ် ။ တော်တေ်ာများများ ဒီအပိုင်းမှာ ကွဲပြားနေတာက Talent ဆိုတာကို ပင်ကိုအရည်အချင်း (သို့) မွေးရာပါ စွမ်းဆောင်ရည်လို့ သတ်မှတ်ကြတာပါပဲ ။
လူမှုစိတ်ပညာနဲ့ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်အရ လူဟာ မွေးရာပါ ကျွမ်းကျင်မှုပါဝင်တဲ့ အမျိုးအစားထဲ မပါဝင်ဘူးလို့ ဆိုထားတာလည်း တွေ့ရပါတယ် ။ ဥပမာအားဖြင့် မွေးရာပါ ရေးကူးတတ်တဲ့ ပျံသန်းနိုင်တဲ့ ၊ အစရှိတဲ့ အခြားသော သတ္တဝါတွေ အများကြီးရှိကြပေမဲ့ လူသားဟာ သင်ယူလေ့လာခြင်းအားဖြင့်သာ ကျွမ်းကျင် တတ်မြောက်နိုင်တယ်လို့ စိတ်ပညာဆိုင်ရာ အယူအဆတွေမှာ တွေ့ရပါတယ် ။ တစ်ချို့သော လူသားတွေမှသာ ချွင်းချက်အနေနဲ့ ထူးခြားသော စွမ်းရည်များ ပါဝင်လာတာကို တွေ့ရမှာပါ ။ ဥပမာ အားဖြင့် မှတ်ညဏ်အားအရမ်းကောင်းတယ် ၊ အသံပါဝါအရမ်းအားကောင်းတယ် ၊ တစ်ခြားသော ထူးခြားသော ဝိသေသများနဲ့ လူသားတွေလည်း ရှိကြပါတယ် ။
အနှစ်ချုပ်ပြောရရင် ပါရမီထူးခြားသော ပင်ကိုအရည် အချင်းဆိုတာကို လေ့ကျင့်သင်ကြားခြင်းဖြင့်သာ ကျွမ်းကျင်တတ်မြောက်နိုင်ပါတယ် ။
Talent is Right Practice လို့ သတ်မှတ်လို့ရပါတယ် ။
အောင်မြင်ကျော်ကြားပြီး ပါရမီထူးခြားတဲ့ စွမ်းရည်ပိုင်ဆိုင်ထားသူတွေက များစွာသော လေ့ကျင့် သင်ကြားမှုတွေကို ဇွဲ အပြည့်နဲ့ ကြိမ်ဖန်များစွာ လေ့ကျင့်ထားသူတွေပါ ။ တနည်းဆိုရရင် လေ့ကျင့်သူတိုင်း Talent Person မဖြစ်ပေမဲ့ Talent Person တိုင်းကတော့ Practice ရှိသူတိုင်းဖြစ်ကြမှာပါ ။ ဒါကတော့ Talent နဲ့ပတ်သတ်ပြီး တစ်ဦးတည်း ဖွင့်ဆိုချက်ဖြစ်ပါတယ် ။
လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာလည်း အရည်အချင်းရှိတဲ့ ပါရီမီရှိတဲ့ ပင်ကိုစွမ်းရည်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူဝန်ထမ်းတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားနိုင်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ် ။ Talent War လို့ ခေါ်တဲ့ ပင်ကိုစွမ်းရည်ရှိသူတွေ ၊ ကျွမ်းကျင်တဲ့ ၀န်ထမ်းတွေ အလုအယက်အပြိုင်အဆိုင် ခေါ်ယူနေရတဲ့ ခေတ်ထားမှာ ၀န်ထမ်းရေးရာ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေရသူတွေ အနေနဲ့ အဓိကထားလုပ်နေရတဲ့ အပိုင်းက Talent Person တွေကို ရှာဖွေစုဆောင်းတာနဲ့ သူတို့ရဲ့ အရည်အချင်းတွေကို ဖော်ထုတ်မွေးမြူ ရတဲ့ အပိုင်းက လုပ်ငန်းတွေအတွက် အရေးကြီးတဲ့ အပိုင်းဖြစ်လာပါတယ် ။
အရင်တုန်းကတော့ Recruitment and Selection လို့ သုံးခဲ့ပေမဲ့ တစ်ချို့ နိုင်ငံတကာ လုပ်ငန်းတွေမှာ Talent Acquisition ဆိုတဲ့ စကားရပ်တွေအဖြစ် အသုံးချလာတာကို တွေ့နေရပါတယ် ။ ဒါဆိုရင် Talent ရှိသူတွေ မိမိအဖွဲ့အစည်းကို ရောက်ဖို့ အရေးကြီးနေတဲ့ အချိန်အခါမှာ ဘာတွေ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုမလဲ ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒီနေ့ ဆောင်းပါကနေ တစ်ဆင့်တင်ပြချင်ပါတယ် ။ Recruitment and Selection တစ်ခုထက် ပိုပြိး ကျယ်ပြန်လို့ ထိရောက်ပြီး အရည်အချင်းရှိသူတွေကို ရွေးချယ် စုဆောင်းရတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေက Recruitment နဲ့ ကွဲပြားခြားနားနေတာကို တွေ့ရမှာပါ ။
The Recruitment isapart of Talent acquisition လို့ ဆိုထားတာကြောင့် Recruitment Function ထက်ပိုပြိး နက်နဲပါတယ် ။ မိမိလုပ်ငန်းအတွက် လိုအပ်တဲ့ သူကို ခေါ်ယူနိုင်ဖို့ ၊ ထမ်းဆောင်ရမယ့် တာဝန်တွေ ၊ လုပ်ငန်းတာဝန်သတ်မှတ်ချက် (JD) တွေနဲ့ ပြည့်စုံယုံတင်မကပဲ အဖွဲ့အစည်းအတွက် လိုအပ်တဲ့ အနာဂတ်ကာလကို မျှော်မှန်းပြီး ရောက်ရှိလာမယ့် Talent Person ကို လုပ်ငန်းအတွက် အသုံးပြုနိုင်ဖို့ ရွေးချယ် စုဆောင်းရတာမို့ လွယ်ကူတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တော့မဟုတ်ပါဘူး ၊ ဒီတော့ အခြေခံကျနဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေကို တင်ပြပေးချင်ပါတယ်။
1️⃣Planning and Strategy
အရင်ဆုံး မိမိလုပ်ငန်းရဲ့ လိုအပ်ချက် ၊ အနာဂတ်ကာလအတွက် Workplace ရဲ့ လိုအပ်ချက်ကို နက်ရှိင်းစွာ
နားလည်သဘောပေါက်ရမှာဖြစ်သလို ၊ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ
ရပ်တည်မှုအတွက် အနာဂတ်ကာလမှာ ဖြစ်လာမယ့် Local and Global Labor Markets ကိုလည်း ကြိတင် ရှမြင်သုံးသပ်နိုင်ဖို့ လိုပါတယ် ။ ဒါတွေကို သေချာစွာ ချိန်ဆနိုင်ပြီဆိုရင်တော့ လိုအပ်တဲ့ Planning and Strategy ကို မိမိအဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ ဘယ်လို သုံးသပ်ဆောင်ရွက်မလဲ ဆိုတာကို ရေးဆွဲ ပြင်ဆင်ထားရမှာပါ ။
Talent Acquisition အတွက် Workforce Segmentation အပေါ် ဘယ်လောက်နားလည်ထားသလဲ ဆိုတဲ့ အပေါ်မူတည်ပါတယ် ။ မိမိလုပ်ငန်းခွင်အတွင်းက ကွဲပြားခြားနားတဲ့ Workforce Segment တွေကို ကောင်းစွာ နားလည်သဘောပေါက်ဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ် ။ လုပ်ငန်းခွင်ထဲက မတူကွဲပြားတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေ ၊ ရာထူး နေရာတွေ ၊ Skill and Competencies တွေ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံတွေက အောင်မြင်မှုအတွက် ဘယ်လောက် အရေးကြီးတယ် ဆိုတာကို position တစ်ခုချင်းစီအလိုက် ကောင်းစွာ ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုပါတယ် ။
ဒီဘက်နှစ်ထဲမှာ Employer Branding နဲ့ပတ်သတ်ပြီး Award တွေ ပေးလာတာကို တွေ့ရမှာပါ ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Employer Branding ကို ဦးစားပေးတာဟာ အဖွဲ့အစည်းရဲ့ ပုံရိပ်ကို မြှင့်တင် စေတာဖြစ်သလို Talent Employee တွေကို ဆွဲဆောင် နိုင်တာတွေ ၊ Top Candidates တွေကို မိမိအဖွဲ့အစည်းအတွင်းရောက်လာအောင် လုပ်ဆောင်နေကြခြင်းပါပဲ ။ မိမိလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းအပေါ် ကောင်းမွန်တဲ့ ပုံရိပ်နဲ့ ဂုဏ်သတင်းအတွက် တည်ဆောက်နေကြတာပါပဲ ။ နောက်တစ်ချက်ကို Marketing အတွက်လည်း ကြီးမားတဲ့ လုပ်ငန်းအထောက်အပံ့ဖြစ်စေမှာပါ ။ နိုင်ငံတကာ လုပ်ငန်းတွေက Employee Branding ကိုပိုပြိး အလေးထား ဆောင်ရွက်ကြတာဟာ ဒီအခြေခံကျနဲ့ အချက်တွေကြောင့်ပါပဲ။
4️⃣Talent Scoping and Management
အရည်အချင်းရှိသူ ၀န်ထမ်းလောင်းတွေက မတူကွဲပြားတဲ့ နေရာများစွာမှာ ရှိကြပါတယ်။ Internal & External မှာလည်း ရှိတတ်ပါတယ်၊ လုပ်ငန်းခွင်မှာ Talent ရှိပါလျက်နဲ့ မကျွမ်းကျင်တဲ့ နေရာမှာ လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်နေရတဲ့ ၀န်ထမ်းတွေလည်း ရှိကြပါတယ် ။ဒါကြောင့်မို့ အလားအလာရှိတဲ့ ၀န်ထမ်းလောင်း တွေကို ရွေးချယ်ရှာဖွေရာမှာ လိုအပ်တဲ့ ဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်ရမယ့် နေရာတွေ ၊ လူပုဂ္ဂိုလ်၊ အဖွဲ့အစည်းတွေကို ရှာဖွေ သိရှိထားနိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သူတို့တွေနဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ ဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်ထားနိုင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ မိမိအဖွဲအစည်းအတွက် လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာ သူတွေကို မှန်ကန်စွာ ရွေးချယ်နိုင်ဖို့ သင့်တော် အခြေအနေတစ်ရပ်မှာ ထည့်သွင်းနိုင်ဖို့ စီစဉ်ထားနိုင်ဖို့ပါ။
5️⃣Matrices and Analytics
နောက်ဆုံးအချက်အနေနဲ့ မိမိရဲ့ Talent Acquisition Strategy ဟာ Key Matrices ကို အသုံးမပြုပဲ မပြည့်စုံဘူးလို့ဆိုထားပါတယ် ။ ဒါကြောင့် မိမိရဲ့ Strategy ကို ပြန်လည်သုံးသပ် Analysis လုပ်ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအပိုင်းမှာ မိမိလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေ ၊ ရွေးချယ်စုဆောင်းထားခဲ့တဲ့ Talent Person တွေက Organization Goals အတွက် Effective ဘယ်လောက်အထိဖြစ်သလဲ ဆိုတာမျိုး ကအစ တိုင်းတာ လေ့လာလို့ရပါတယ် ၊ နောက်ပိုင်း Talent Matrices တွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ချိန်ဆပြီး မိမိ ရဲ့ Talent Acquisition Strategy ကို ပြန်လည်လေ့လာသုံးသပ်ရမှာပါ
ဒီအပိုင်းအထိကတော့ Talent Acquisition ရဲ့ အခြေခံကျတဲ့ အချက်လောက်တွေကိုသာ အနည်းငယ်မျှဝေပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ် ။ ဒိထက်ပိုမိုကျယ်ပြန်တဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေကို ဆောင်ရွက်ရတာမို့ အရည်အချင်းရှိသူ ၊ပင်ကိုစွမ်းရည်ရှိသူတွေကို ရှာဖွေရတာ လွယ်ကူတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တော့ မဟုတ်ပါဘူး ။ ဒါတွေအားလုံးကတော့ Talent Management ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်ကနေ ဆောင်ရွက်ရတာမို့ Talent Management အကြောင်းကိုလည်း အနည်းငယ် ရေးသားလိုပါသေးတယ်။
Talent Management Process မှာ အခြေခံအားဖြင့် သိထားရမယ့် Process တွေကတော့
12. Succession Planning ဆိုပြီး process တွေ
ဒါကတော့ အခြေခံအားဖြင့် လုပ်ရတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေပါ ။ မိမိ အဖွဲ့အစည်းအတွက် အရေးအချင်းရှိသူတွေ ရွေးချယ်ရတာ မလွယ်ကူသလို ၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်အောင် လုပ်ပြီး ထိန်းသိမ်းရတာ မလွယ်ကူလှပါဘူး ။ ၀န်ထမ်းတွေမှာ ပါလာတဲ့ တစ်ဦးချင်းစီတိုင်းရဲ့ Talent ကို ဖော်ထုတ်အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း အားဖြင့် အဖွဲ့အစည်းအတွက် အရေးပါအတဲ့ ပန်းတိုင်ကို ရောက်ရှိစေဖို့ဆိုတာ Human Resource Management ကို အကောင်အထည်ဖော်နေရတဲ့ HR သမားများအတွက် စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေတဲ့အနာဂတ်ဆိုတာကို ကြိုတင် တွေးတော စဉ်းစားစေချင်ပါတယ် ။
Ref : Talent Management : A Focus on Excellence ( Managing Human Resource inaKnowledge Economy ) Patrick Merle
Posted by Alex Aung at 9:23 AM
သရက်သီးပီဇာ _ထားဝယ်မုန့်လက်သုပ်_ Buttermilk Fried ...
🕴️🕴️🕴️ရုပ်သေး HR မဖြစ်ဖို့🕴️🕴️🕴️
ကြက်ဆီဖတ်ထောင်း _ ပြောင်းဖူးနှင့် ကင်းမွန်သုပ်_ ၀က...
အံ့ဝင့်ထွဋ် ရဲ့ ဟင်းလျာအချိ
သပြေသီးနှင့် သပြေစေ့ ဆေးဖက်ဝင်ပုံ
💢💢💢 gym ကစားခြင်းနှင့် endorphins ဟော်မုန်းအကြေ...
ငါးပုဏ္ဏားဆူဆီ - မှိုအစပ်ချက် - လယ်ပတူရွက်သုပ် -ဆိတ...
💢💢💢 လူတိုင်းသိထားသင့်သည့် diet ၏ အခြေခံများ 💢💢💢
အုန်းမှုတ်ခွက် နင်းခြင်းဖြင့် ရရှိလာမည့်အကျိုးကျေးဇ...
အလုပ်ပြောင်းရင် ဘာတွေပြင်ဆင်သင့်သလဲ ?
ဖက်တီးအသည်း (ဝါ) အသည်းအဆီဖုံးခြင်းနှင့် အစားအသောက်
ရှမ်းပဲပုပ်ထမင်းကြော်နှင့် ဝက်သားဂျူးမြစ်ထောင်း _ ...